ဘရုတ်ဘရက်တိုင်းပြည် | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ဘရုတ်ဘရက်တိုင်းပြည်	Posted by mm thinker on November 16, 2008
Posted in: Satire.	Tagged: Satire.	(ရယ်ရွှင်ဖွယ် မဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၂၇ ခုနှစ်ထုတ်မှ။ ဒီသရော်စာကို ဟာသစာပေစာအုပ်ထဲမှာ ထပ်မံဖော်ပြထားတာကို ကူးယူတင်ပြတာပါ။ သတ်ပုံမူရင်းအတိုင်း။ ၁၉၂၇ တုန်းက သရော်ခဲ့တာတွေဟာ ခုချိန်ထိ မှန်နေသလားဆိုလား ကိုယ့်ဖာသာပဲ တွေးတောကြပါကုန်။ ကျနော်ကတော့ ဖတ်ပြီး ကြိုက်လွန်းလှ၍ ဘလော့ဂ်ဆွေမျိုးများကို မျှလိုက်ပါသည်။ အဓိပ္ပယ်နားမလည်မှာ စိုးလို့ ပါဠိနေရာတွေမှာ ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ ကာရံညီအောင် ဖွင့်ဆိုချက်ကို ကျနော်က စေတနာတွေပိုကာ ထည့်ထားတာ ဖြစ်ပါကြောင်း။ သင်ကာ)
← “အ”တွေ A ဖြစ်ကုန်ရင်	ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ ဦးအေးမောင်နှင့် ဥပသကာ၏ပို့စ် →	Pages	about